ဒူကထောင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုဂျူဗလီပွဲတော်နှင့် ဘုရားကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တက်ရောက်
ပင်မစာမျက်နှာ > December,2018 > December 22.1
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့ ဒူကထောင်ရပ်ကွက်ရှိ ဒူကထောင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် တည် ထောင်ခြင်း နှစ်(၅၀)ပြည့် ရွှေရတုဂျူဗလီပွဲတော်နှင့် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးသည့် ဘုရားကျောင်းဆောင် သစ်ဖွင်ပွဲအခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် မွန်းတည့် ၁၂ နာရီတွင် ဖွင့်လှစ်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာခက်အောင်နှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဒူကထောင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် သိက္ခာတော်ရဆရာတော်ကြီးများက ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပေးကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ သိက္ခာတော်ရဆရာတော် Rev.Pausa Gam Hpang ၊ Rev. Sabaw Sinwa Naw Rev. Dumhpau Sam La တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြ သည်။
အဆိုပါ ဒူကထောင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် နှစ်(၅၀)ပြည့်ရွှေရတုဂျူဗလီပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၂၅ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုတောင်းဆက်ကပ်ခြင်း၊ မနောအက ကခြင်းနှင့် ညပိုင်းတွင် ခေတ်ပေါ်တေးသီချင်းများသီဆိုခြင်းနှင့် စျေးဆိုင်တန်းများဖြင့် စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။